Mpiasan’ny fahitalavitra MBS Hita faty niantona tao an-tranony i Herizo
Nodimandry i Herizo Rajaonarivony, mpaka sarin’ny fahitalavitra MBS. Hita nihantona tao an-trano fonenany teny Anosipatrana ny nofo mangatsiakan’ity mpiasa amina haino aman-jery ity omaly.
Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahafaty azy fa mbola miandry ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitsabo na ny "médecin légiste" manoloana ny fahafatesana tampoka nahazo an’i Herizo. Olona tsotra tamin’ny ankapobeny no nahafantarana azy teo amin’ny sehatry ny haino aman-jery, indrindra fa tamin’ny fifaneraserana tamin’ny namana sy mpiara-miasa teo amin’io tontolo io. Ny Fianakaviam-ben’ny Gazety Tia Tanindrazana dia miombona alahelo sy mirary fiononana feno ho an’ny fianankaviany manontolo sy ny mpiara-miasa aminy rehetra.